I used to stare at fat people when I was sitting inateashop. I like their character, the way they walk, and their body shape. So I decided to draw them. I just wanted to draw images of fat people. Then I used them asasubject for my paintings. It’s not about the people in my surroundings. I also wanted to include clay pots to reflect Burmese custom. But the main idea lies in the use of colour. There’s yellow and there’sasmall amount of blue at the bottom to show the nature of water. That’s it. I wasn’t showingalot. I worked foramagazine for five years from 1988. Then I started my career as an artist in 1993. First I used watercolour. Like everybody else, I just worked on landscapes and realistic presentations. In 1998, fat people caught my attention and I started drawing them. I applied distortion to twist their natural size. Some areas may be bigger and some may be smaller. This is distortion. My painting isacombination of distorted and asymmetrical parts.
Since 2000, I’ve done four solo shows. There’ve been small changes. Sometimes I just use colours with fat people as my subject. There are gradual changes in my style. There are fat men in my paintings, but there are more fat women. In the past decade I took part in group shows here and there, but I didn’t haveasolo show.
I don’t think about society and the outside world much. I only look for what to paint next. I only think about the subject and style for my paintings. That’s just it.
အရင်တုန်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်းနဲ့ လူဝတွေကို သတိထားကြည့်မိတယ်။ သူတို့ရဲ့ character တွေ၊ သွားပုံလာပုံတွေ၊ ကိုယ်လုံးဝဝကြီးတွေ၊ အချိုးအစားတွေကို သဘောကျလို့ ရေးဖြစ်သွားတာ။ အမှန်ကတော့ ဝတဲ့လူကို ဆွဲတာပါပဲ။ ပန်းချီမှာ ပုံသဏ္ဠာန်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲ ရေးတာဖြစ်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ လူတွေကို အဓိကထားပြီး ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ ကျနော်တို့ ဗမာတွေရဲ့ ရိုးရာဟန်တွေလည်း ပါအောင်ဆိုပြီး ရေအိုး ထည့်ရေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဓိက အကြောင်းအရာက ခုနအတိုင်း အရောင်ပါပဲ။ အဝါရောင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အောက်မှာ အပြာရောင်လေး နည်းနည်းထည့်ထားတယ်။ ရေရဲ့သဘောပေါ့၊ အဲ့လောက်ပဲလုပ်တာပါ။ အများကြီး ပြထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ မဂ္ဂဇင်းမှာ ၁၉၈၈ ကနေ ၁၉၉၃ လောက် အထိ ရေးခဲ့တယ်။ ၁၉၉၃ လောက်ကျတော့ ပန်းချီလောကထဲစဝင်တယ်။ ရေဆေးကားတွေပေါ့။ အဲ့တုန်းကတော့ အများလိုပါပဲ။ ရှုခင်းတို့ ပုံမှန် realism ပုံစံမျိုးပဲ ရေးတာပါပဲ။ အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ ၁၉၉၈ လောက်ကျမှ လူဝကြီးတွေကို စပြီး စိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့ ရေးဖြစ်လာတာ။ distortion ဆိုတာ လူပုံကိုပဲ ခုန ဝဝကြီးတွေကိုပဲ အချိုးဖျက်ပြီးတော့ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ကြီးချင်တာတွေ ကြီး သေးချင်တာတွေသေး အဲ့လိုရေးတာကို distortion လို့ပြောတာပေါ့။ အချိုးအစားမညီညွတ်မှုတွေနဲ့ ပန်းချီကားကို ဖွဲ့စည်းတာပေါ့။
၂၀၀၀ နောက်ပိုင်းပေါ့ ၄ ကြိမ်မြောက် solo show လုပ်ခဲ့တယ်။ နည်းနည်း ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်ပေါ့။ တချိ့ဟာတွေမှာ ဒီအတိုင်းပဲ ကာလာတင်ပြီးတော့ လူဝကြီးတွေကိုရေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ အကို့စတိုင်ကပြောင်းပြောင်းလာတယ်။ ရေးဖြစ်တဲ့ လူဝကြီးတွေမှာ ယောင်္ကျားတွေလည်းပါတယ်၊ အမျိုးသမီးက ပိုများပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်မှာ group show တွေထဲတော့ ဝင်ဝင်ပါဖြစ်တယ်။ solo တော့မရှိဘူး။
လူ့အဖွဲ့အစည်း အပြင်လောကကို အများကြီး ခေါင်းထဲထည့်မထားဘူး။ ရေးစရာအကွက်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာ ရှာတာပေါ့။ ရေးစရာနဲ့ ရေးချင်တဲ့ဟန်ကိုပဲ တွေးယူတယ်။ အဲ့လောက်ပဲ။
၂၀၂၀ မတ် ၄